AL-SHABAAB oo aan wax liisto argagixiso ah ku jirin | WWW.SOMALILAND.NO
AL-SHABAAB oo aan wax liisto argagixiso ah ku jirin
Waxaa maalintii shalay ahayd uu madaxa haayadda sirdoonka ee booliska Norway (PST) ku sheegay urur soomaali ah oo lagu magacaabo AL-SHABAAB in uu yahay urur argagixiso oo ay tahay in laga fogaado. Laakiin sida wakaaladda wararka ee NTB ay soo warinayso waxaa jirta in aanu ururkani ku jirin liistada argagixisadda ee MARAYKANKA, QM iyo EU midna. Hadaba waxaa la isweydiinayaa oo jaraa’idka Norwayna maanta wax ka qorayaan sababta kaliftay in ay Norway keligeed iskaga dhex saarto dunida inteeda kale oo ay hormood u noqoto arintan.
Norway ayaan lahayn wax liisto argagixiso ah oo ururadda lagu daro, laakiin se waxaa la ogyahay in uu dalka Norway wada shaqayn aad u dhaw la leeyahay dalka Maraykanka. Inkasta oo meelaha qaarkoodna ay isku khilaafsanyihiin. Waxaa jaraa’idka todobaadlaha ah ee Ny Tid uu shalay soo qoray fadeexad ku saabsan in Norway ay dhaqaale siiso ururka la dagaalama dawladda dalka Sri Lanka ee magaciisa marka la soo gaabiyo lagu magacaabo LLTE. Ururka ayaa waxaa uu ku jiraa liistada MARAYKANKA, EU-da iyo Canada intaba. Arintan ayaa jaraa’idkani ku sheegay kala eexasho ay dawladda Norway u kala eexanayso ururada aduunka ka jira, halka kuwa soomaalida ee aan ku jirin wax liis argagixiso ahna ay ku sheegayso argagixiso kuwii ku jirayna ay dhaqaale ku taageerayso.
Arintan ah in cidii la doono la shaanbadeynayo, cidii kalena la iska sii daynayo ayaa dadka ajaanibka ah, siiba kuwa muslimiinta ah ee dalka Norway deggan ku abuurtay walaac iyo werwer. Khabiir jaamacad Norway ku taala wax ka dhiga oo jaraa’idka Ny Tid waraystay ayaa sheegay in turjumaada arintan lagu turjumikaraa ay tahay LABA-WAJIILEYN aan geedna loogu soo gaban.
Maqaalka Ny Tid halkan ka akhriso.
« Xaflad Lagu xusaayay Maalinta Haweeenka Aduunka 8March oo lagu qabtay Qasriga Madaxtooyada ee Magaalada Hargeysa Kor u kaca codbixinta soomaalida Norway oo ugu saraysay »